Etu Etu Wallet Mobile Si Enweta Ahịa | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 24, 2015 Na Mọnde, Nọmba 24, 2015 Douglas Karr
M na-ebu iPhone m n'ụzọ mara mma, ejiri akpụkpọ anụ mee Kedo akwa na Quill nke nwere ohere maka ID m na ụfọdụ kaadị akwụmụgwọ mana ọ bụghị ọtụtụ ọzọ. N'ihi ya, m na-adabere na ngwa mkpanaka na obere akpa mkpanaka m ntakịrị. Otu ngwa m hụrụ n'anya bụ Eriri Ngakọ Igodo, na-eme ka m tụfuo kaadị klọb m nile ma tinye ha n'otu ebe.
N'oge na-adịghị anya mgbe m kwadokwasịrị Key Ring, ana m akwọ ụgbọala n'ụlọ m wee pụta na ekwentị m na otu n'ime ụlọ ahịa ndị m na-agakarị nwere onyinye. Kpamkpam amamiihe… M wetara, gbapụtara dere, ma na-a ukwuu. Anaghị m achọ azụmahịa ma ọ bụ na m na-atụ anya na m ga-aga ahịa n'abalị ahụ - mana ebe ahụ ka ọ mere. Mmata ebe na ngwa akwụ ụgwọ maka ndị na-ere ahịa!
Ndị mmekọ SIM emepụtala infographic nke na-atụle ihe kpatara ndị na-ere ahịa / ndị ahịa kwesịrị ịnabata obere akpa mkpanaka n'oge oge na-abịanụ. Na ezumike dị n'akụkụ akuku, ọ dị mkpa ugbu a maka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ka ha ghọta ike nke ịzụ ahịa ekwentị:
Otu ọnụọgụ 56% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha ga-achọ ịnweta onyinye sitere na ọnọdụ na ekwentị ha.
Obere akpa ekwentị na-enyefe 64% ọnụọgụ mgbanwe dị elu karịa akwụkwọ ntanetị weebụ.
Mobile awade mbanye a 26% abawanye na nkezi iji uru karịa static mobile web na-enye.
M n'eziokwu ekweghị ịjụ ma ọ bụ na m ọbụna na-atụ anya na-enye na m nnọọ hụrụ ya n'anya! Kedu oge ka mma ị ga-esi nye onyinye dị mkpa karịa karịa mgbe atụmanya dị nso na ụlọ ahịa gị?
[igbe ụdị = ”download” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Download SIMPartners Ntuziaka 2015 Retail Guide maka nghọta ndị ọzọ banyere ị nweta ihe kachasị mma n'oge ezumike. [/ igbe]
Tags: in-ụlọ ahịaeriri Ngakọ Igodomata ebeonyinye dabere na ọnọdụmobile ngwa ọdịnalaobere akpa mkpanakamobile wallet na-enyeere ahịaSIMPartners